The Ab Presents Nepal » खुसीको खबर एमसीसी पास गर्न नहुने लाइनमा नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्य सेयर गरौ !
खुसीको खबर एमसीसी पास गर्न नहुने लाइनमा नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्य सेयर गरौ !
काठमाडौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलको क्रममा अनौठो नतिजा देखिएको छ। सरकार र सरकारमा रहेको दलका शिर्ष नेताहरू अमेरिकी परियोजना एमसीसी लागु गर्ने तयारी गरेको बेला बहुमत केन्द्रीय सदस्य भने पास गर्न नहुने लाइनमा देखिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा गृहमा समूहगत छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सदस्यहरू अमेरिकी सहयोग नियोगअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजनाको विपक्षमा रहेको एक नेताले बताएका छन् ।
“अहिलेकै शर्त स्वीकार गरेर एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भन्ने नै धारणा सबैको छ” उनले भने । सबै समूहमा रहेको सदस्यहरूको पनि मत बुझिएको र उनीहरूको धारणा पास गर्न नहुने रहेको उनको भनाई छ ।
सभामुख चयनमा समेत सम्झौता गरेर पास गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको एमसीसीमा नयाँ ट्वीस्ट आएपछि पार्टी नेतृत्वलाई तनाव बढेको बताइएको छ । एक नेताले भने “पार्टीमा एमसीसी हर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन नेतृत्वको दवावको कारण कसैले केहि भन्न नसकेका मात्र हुन्, पास नगर्ने लाइनमा बहुमत छ।”
यो पनि हेर्नुहोस बिदेश बाट पहिले पल्ट 4K म्युजिक भिडियो